Ixesha lokuphakamisa ukuxuba kwi-plane ephezulu! Ukuxuba kunye nokuwuphonsa phantsi! (kuveliswe) - Ukubala kwe-NYE ku-Djs, Vjs, ii-nightclub 2019
SKU: DJ DROPS 70 - #55 Udidi: DJ Drops
Ixesha lokuphakamisa ukuxuba kwi-plane ephezulu! Ukuxuba kunye nokuwuphonsa phantsi! (kuveliswa)
Isitayile samagintsa? Ngokwenene ... Dude ayeke! (kuveliswa)
Hambisa abantwana, hambani! (kuveliswa)
Ukubuyela emuva kwi-80 kunye neklasiki engapheliyo! (kuveliswa)
Yibamba intombazana, ubambe isiselo kwaye uphazamise imilomo yakho ... uNyaka omtsha ulapha! (kuveliswa)
Ndiyabulela ngokuphuma kunye nokubhiyozela uEva wonyaka omtsha nathi. Sivaliwe ngoku ukuze sikubone kwi-Waffle House! (kuveliswa)
Ngamana ndingamkela ingqalelo nceda. Iqela langempela liqala ngemizuzu ye-15 nje! Lungela! (kuveliswa)
Omnye u memezela! Ngoku, yenza oku ngakumbi! (kuveliswa)
Ladies and Gentleman ... Unyaka omtsha onoyolo! (kuveliswa)
Eli qela liye lavunyelwa yiCCC. Ummmm ubhekise iFCC! Masibe neqela langempela @ # @ n! (kuveliswa)